> Resource> iPad> Olee naghachi ehichapụ Videos si iPad
Mmadụ na mberede ehichapụ videos si gị iPad ma na-achọ iji weghachite ha? Echegbula. E nwere ngwọta. Isiokwu a na-aga na-egosi gị ụzọ abụọ iji naghachi ehichapụ vidiyo si na iPad: kpọmkwem iṅomi ma naputa site na gị iPad ma wepụ gị iTunes ndabere nke iPad iji weghachite ehichapụ videos. Ma ụzọ nwere ike mere 5 nkeji na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). N'agbanyeghị ihe gị na kọmputa-menjuobi bụ, ị nwere ike ijikwa a nanị ya n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Gịnị Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere ike ime:
iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2/1
iPod aka 5/4
Text ọdịnaya: kọntaktị, ozi (SMS, iMessages & MMS, gụnyere Emoji), Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Notes, WhatsApp-akparịta ụka, na-echetara, Safari ibe edokọbara
Media ọdịnaya: Igwefoto Roll (Photo & Video), Photo Library, Photo Stream, Message Mgbakwụnye, Voice memos, oziolu, WhatsApp Mgbakwụnye
Wonderhare Dr.Fone maka iOS-akwado ndị niile ụdị nke iPad. Dị nnọọ download free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị na-enweghị nchegbu.
2 Ụzọ naghachi ehichapụ Videos si iPad
Nkebi nke 1: weghachite ehichapụ iPad vidiyo site Adịrị iTunes ndabere
Part 2: Kpọmkwem Naghachi ehichapụ Videos on iPad
Ọ bụrụ na ị synced gị iPad na iTunes tupu, ị nwere ike weghachite gara aga videos site na ya. Kama nke iweghachi dum iTunes ndabere faịlụ, Wondershare Dr.Fone maka iOS-ahapụ gị wepụ nkwado ndabere na mpaghara selectively naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka ya, dị ka videos. Ọ nwere ike na-ezu ezu na nzọụkwụ abụọ. Dị na-agụ na na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji nweta ya mere ugbu a.
Nzọụkwụ 1. Họrọ ma wepụ iTunes ndabere gị iPad
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị na-ahọrọ mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File. Mgbe niile iTunes ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị ga-akpaghị aka hụrụ na egosipụta n'ihu gị. Ị nwere ike ịhọrọ onye maka gị iPad dị ka aha nke ngwaọrụ, ma ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu ndabere faịlụ pụtara. Mgbe ahụ ike iṅomi wepụ ya site na ịpị Malite iṅomi bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2. Tulee na-agbake furu efu videos na gị iPad
Ọ bụghị naanị na ẹdude data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, kamakwa data na ị ehichapụ si iPad tupu syncing ya iTunes nwere ike Ewepụtara si ndabere faịlụ. Mgbe iṅomi, ị nwere ike ịlele amịpụtara data na Doppler N'ihi site usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị pụrụ ego vidiyo si na udi nke Igwefoto Roll. Tinye akà rà na ihe ịchọrọ na pịa na Naghachi button iji zọpụta ya na kọmputa gị.
Download ikpe mbipute a iPad video mgbake software inwe a na-agbalị ugbu a!
Nkebi nke 2: Kpọmkwem Naghachi ehichapụ Videos on iPad
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad na ike iṅomi ya
Ugbu a, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere ike na-enyere iji weghachite ehichapụ videos kpọmkwem site iPad 1. N'ihi na ndị ọzọ ụdị nke iPad, ọ pụrụ nanị chọta ẹdude videos na gị iPad, ọ bụghị na-ehichapụ otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-ehichapụ otu, i nwere ike ịgbalị mbụ ụzọ n'elu ego gị iTunes ndabere.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPad 1, jikọọ ya na kọmputa na eriri USB. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru mgbe gị iPad a ghọtara. Soro nkọwa na window ịbanye ngwaọrụ scanning mode ka iṅomi ehichapụ videos na ya. I nwekwara ike na-agụ ndu n'okpuru:
1. Pịa na Malite bọtịnụ na usoro si window na-amalite.
2. Ozugbo ị malitere, pịa Home na Ike buttons na gị iPad n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Mgbe ahụ, ị nwere ike hapụ Ike button dị ka mara si usoro ihe omume, ma na-na ịpị Home bọtịnụ maka anther 10 sekọnd, ruo mgbe ị na-asian na ị na banyere scanning mode ọma. Mgbe ahụ usoro ihe omume amalite nyochasịrị gị iPad, na ịgụ isiokwu ya mgbe na.
Nzọụkwụ 2. Tulee recoverable videos na gị iPad
Mgbe scanning zuru ezu, ị nwere ike ịlele recoverable data na Doppler N'ihi. N'ihi na videos, ị nwere ike ịlele ha na igwefoto Roll. Kaa ihe ị chọrọ na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Download free ikpe version n'okpuru inye a na-agbalị na gị iPad!
Olee otú Naghachi ehichapụ Data site na iPad Obere 2 (Retina)
Olee otú Hichapụ Movies ma ọ bụ Videos si iPad / iPad Obere
iPad Photo Manager: Jikwaa Photos na gị iPad Ọfọn
Etinye music on iPad si PC na ala
Main-eru Nso Play PowerPoint Presenations on iPad